अब्राहामलाई किन परमेश्वरको मित्र भनियो? – Shalom Nepal
शालोम नेपाल – अब्राहम पापरहित थिए। उनी बाइबलमा उल्लेखित महान व्यक्तिहरू मध्ये एक थिए। उनको विश्वास हामीहरूको उदाहरणको लागि नया नियममा उद्धृत गरिएको छ (याकूब २, हिब्रू ११)। बाइबलमा अब्राहमलाई “परमेश्वोरको साथी” भनिएको छ (२ इतिहास २०:७; यशैया ४१:८)।
अब्राहाम आज्ञाकारी मानिस थिए। जब उनले आफ्नो देश र आफन्त छोडेर गए तब अब्राहमले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरे र उनले इसहाकको बलिदानको सम्बन्धमा ठूलो विश्वास देखाए (उत्पत्ति २२, हिब्रू ११:८-१०)। तसर्थ हामीले कहिल्यै अब्राहामले परमेश्वरसँग तर्कसंगत कुरा गरेको र आज्ञा उल्लंघन गरेको पाउदैनौं।
अब्राहम शीघ्र र शान्त मानिस थिए। परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, “… तिम्रो देशबाट निस्की आऊ ….” हामीले तुरुन्तै पढ्यौं, “… अब्रामले प्रभुले भन्नुभए जस्तै गरी उनी हिंडे …” (उत्पत्ति १२:१,४) । बाइबलका उत्कृष्ट व्यक्तिहरू जहिले पनि कामकोलागि उदाहरणिय मानिस थिए (मत्ती 4:१८-२२, प्रेरित ९:२०, १०:३३)। शान्तिको लागि अब्राहमको इच्छा लोतसँग उसको व्यवहारबाट देखिन्छ (उत्पत्ति १३:५-१२)। त्यसैले सुसमाचार चाहि “शान्तिको सुसमाचार” पनि हो (रोमी १०:१५)।
अब्राहम एक मानिस थिए जो निस्वार्थ र पूर्ण नियन्त्रणमा थियो। ऊ उदारतापूर्वक दिने व्यक्ति थियो (उत्पत्ति १४:१७-२४, हिब्रू ७:४, २०)। हामी मध्ये धेरै उपभोग गर्छौं र केवल स्वयंलाई सन्तुष्ट पार्दछौं (लूका ९:२३)। साथै, अब्राहमको बारेमा पनि भनिएको थियो, “… किनकि म उनलाई जान्दछु कि उसले आफ्ना नानीहरू र उसको परिवारलाई उसको पछि लाग्ने आदेश दिन्छ” (उत्पत्ति १८:१८,१९)।
परमेश्वरसँगको मित्रता एक योग्य लक्ष्य हो। येशूले भन्नुभयो, “म तिमीहरूलाई जे आज्ञा गर्दछु, ती तिमीहरूले गर्‍यौ भने, तिमीहरू मेरा मित्र हौ” (यूहन्ना १५:१४)। परमेश्वरका शत्रुहरू अति नै छन् (याकूब ४:४)। अब्राहम परमेश्वरको साथी थिए किनकि उनीसित भएको चरित्रको गुणस्तरको कारण। के तपाईं परमेश्वरको साथी हुनुहुन्छ? हामीले देख्यौं कि येशूसित मित्रता गाँस्न सक्ने तरिका भनेको परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु हो (यूहन्ना १५:१४)। के हामी येशूका आदेशहरू पालन गरिरहेका छौं?
के तपाईं परमेश्वोरलाई चिन्नुहुन्छ?
हरेक समय ।